Global Voices teny Malagasy » Japana: Ilay Mahery fo, Sakamoto Ryoma · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Jolay 2010 14:15 GMT 1	 · Mpanoratra Tomomi Sasaki Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Matoky tena, hentitra sy to teny, ary kinga fatratra, Sakamoto Ryoma (坂本龍馬) dia iray amin'ireo olon'ny tantara tian'ny Japoney indrindra foana. Vao nanomboka nandefa ny tantara mitohy Ryomaden (龍馬伝: ‘Ny tantaran'i Ryoma’) ny NHK tamin'ny volana Janoary, dia teraka ny fankafizana an'i Ryoma manerana ny firenena.
Vohikala ofisialin'ny Ryomaden
Nantsoina hoe “samurai-n'nyfahateraham-baovao'” ao anatin'ny tantaram-piainany  nosoratan'ny mpikaroka Romulus Hillsborough, Ryoma dia anisan'ireo lehiben'ireo mpanongana ny fitondràna Shogun nataon'ny Tokugawa Shogunate. Io fihetsiketsehana io, izay amporisihan'ny mety hisian'ny fanjanahan-tany Tandrefana, dia nahafoana fitondràna mpanjaka efa ho 300 taona. Nifofotra mafy amin'izay ahatongavany ho firenena rakotra indostria eo ambany fitondràna maoderina tarihan'ny Emperora, miaraka amin'ny varavarana misokatra ho an'ny varotra ivelany. Ny blaogy Psychology Masters dia manome fanoritsoritana antsipiriany  ny fiainan'i Ryoma sy ny dikany ara-tantara.
Ryomaden no vokatra farany indrindra anatin'ny lisitr'ireo boky be dia be, horonantsary sy fandaharana amin'ny fahitalavitra momba ny olona. “Isan-taona ny tambajotram-pahitalavitra dia mamokatra tantara mitohy notsoahina tamin'ny tantara marina, ampiasàna vola be mihitsy, antsoina hoe Taiga Drama”, hoy Peter Payne manazava . Ny blaogy Jdrama dia manome lisitra sy fanazavàna tsara ny momba ireo mpandray anjara fototra . Haondrana any amin'ireo firenen-kafa koa i Ryomaden – i Funn dia mitatitra  an-kafaliana fa halefa any Taiwan miaraka amin'ny dikanteny Sinoa ary mety ho any Korea, Tailandy sy Vietnam koa ilay andian-tantara…
Ny fomba fijery an'i Ryoma ankehitriny dia voalaza fa voavolavolan'ny bokin-tantara nosoratan'i Ryotaro Shiba mitondra ny lohateny hoe Ryoma ga Yuku (竜馬がゆく: “Mandroso i Ryoma”). Araka ny hazavain'i pigrilm_reader :
Tsy isalasalana fa ny tsangan'asa tsara indrindra an'i Ryōtarō Shiba dia ilay bokin-tantara Ryoma ga Yuku, miaraka amin'ny Saka no Ue no Kumo. Maro ireo Japoney no mifidy ity boky ity ho baibolin'ny fiainany. Io ihany koa no boky malaza indrindra atoron'ireo mpanao politika sy tale mpanao afera nahazo laza sy harena an'ireo tanora indray mihira. Nahasarika sy nahazo dera eram-po eran-tsaina avy amin'ireo olona teraka taorian'ny ady tany Japana ilay boky. Tena tantaram-pirenena tokoa io tantara an-tsarimihetsika mitohy io.
Hita na aiza na aiza ny sarin'i Ryoma, manomboka any amin'ireo vola vy fahatsiarovana , vifotsin-dabiera  hatramin'ny zava-kanto nivoaka farany . The Hopeless Romantic  dia namoaka sarin'i Ryoma hita manerana ny tanàna, i Time Out Tokyo kosa dia nanao ny lisitr'ireo toerana  ahafahan'ireo mponin'i Tokyo mankafy ny tantara.
Iray amin'ireo toerana malaza fitsidika ny Toeram-pitsangatsanganan'i Katsurahama any amin'ny faritr'i Kochi  [ja], izay itoeran'ny tsangambato lehibe iray vita amin'ny alimo ahitàna an'i Ryoma mitazana ny ranomasina. Mitatitra ny blaogy Citynet fa misy ny tilikambo  [ja] natsangana vonjimaika ahafahan'ireo mpitsidika manakaiky kokoa ilay tsangambato.
Miteny  i Takashi Yoshida :
Mizotra ho amina fifantohan-tsaina tsy manam-paharoa amin'i Ryoma ny firenena. Niankina tamin'i Ryoma foana i Kochi teo amin'ny resaka fizahantany. Na ny seranampiaramanidintsika aza dia antsoina hoe Seranampiaramanidina Kochi Ryoma . Nitondra ny 2 isanjaton'ny vokatry ny faritanin'i Kochi ary 40.9 arivo tapitrisa Yen manerana ny firenena, goavana ny vokatra ara-toekarena nentin'ilay tantara mitohy Ryomaden. (Mety ahazoanao an-tsaina ny vokatr'izany ny nisondrotan'ny karamako 2% !) Noho izaho nonina tany nandritra ny 11 taona dia efa zatra amin'ny lazany any nefa tsy dia azoko antoka loatra io fankafizana manerana ny firenena io. Mangarahara ireo toerana sasany amin'ny fitadiavam-bolany raha azo atao amin'ny fomba mafonja. Manomboka any amin'ny Antoko Demokratika Liberaly hatrany amin'ny Antoko Kaominista Japoney, samy mieritreritra ireo mpanao politika amin'ny andaniny roa fa afa-doza raha toa ka miventy ny anaran'i Ryoma.
Nahoana i Ryoma no manintona fitiavana sy fanajàna lehibe toy izany? I Jon dia namotopotra izany fanontaniana izany  ao amin'ny famintinany ny Sakamoto Ryoma sy ny Fanarenana ny vanim-potoana Meiji  nosoratan'i Marius Jansen.
Ny marina dia ANISAN'ireo olona nanan-toerana ambony i Ryoma nandritra ny Bakumatsu. Ny maha-izy azy, ny toetrany, ny fahaizany mikolokolo fifandraisana sy mamorona fihavanana dia nahafahany nanao zavatra vitsy mpahay. […] Mieritreritra aho fa hahita ohatra maro ianao amin'ny alalan'ny tantaran'ireo olo-malaza ara-tantara izay mety tsy nanatanteraka akory ireo hevitra miavaka izay nampalaza azy ireo, fa naka izany fotsiny ary nanamafy azy na nampiasa ny heriny sy ny fahakingàny hanamarinana izany. Tsy hafa amin'ireo i Sakamoto Ryoma.
Indro misy antony hafa omena ao amina adihevitra iray ao amin'ny vohikala Fanontaniana&Valiny ao amin'ny Yahoo! Chiebukuro . Ny orinasa voaresaka tao dia ny orinasam-barotra an-dranomasina Kaientai . Ny mpiara-miasa amin'i Ryoma, Iwasaki Yataro  dia hanohy ny diany hanaganana ny fanjakàna Mitsubishi.
Fantatrao ve fa i Ryoma no nanangana ny orinasa maoderina voalohany tany Japana? Azoko lazaina fa lasa aloha izy tamin'ny vanim-potoana niainany raha ny sehatra fandraharahana no resahana – niavaka ny fahaizany mampidi-bola. I Ryoma dia nampiasa ny talentany hanasoavana ny firenena, toy izay ho azy irery, izany no antony hanajàna azy fatratra. Tsy vitanao ny tsy hanontany tena hoe inona no mety nitranga raha tsy maty tanora izy.
Topimaso an'ilay fisehoana faharoan'ny Ryomaden
Iray amin'ireo vahoaka mpankafy mahafatra-po i Masayoshi Son , mpanangana ary talen'ny mpanjakan'ny fifandraisana Softbank. Porofo raisina an-kianjoanjo: Ny sary famantarana ny Softbank  dia miainga amin'ny an'ny orinasan'i Ryoma Kaientai (海援隊). Tamin'ny taon-dasa dia ni-tweet  i @masason:
Ny Taiga Drama havoakan'ny NHK amin'ny herintaona dia momba an'i Sakamoto Ryoma, lehilahy hajaiko indrindra noho ny hafa eran'izao tontolo izao. Nanao ny ainy tsy ho zavatra izy hanorenana ny hoavin'i Japana. Zavatra tena mahafinaritra izany. Amin'ny alalan'ny orinasako, ny hitovy fisaina amin'i Ryoma no tena ifoforako mafy.
Sary avy ao amin'ny Tranom-bakoka Edo-Tokyo
Tamin'ny 1863, tao anaty taratasy iray ho an'ny zokivaviny dia nanoratra i Ryoma, “te-hanadio an'i Japana indray aho.”
Naranty tao amin'ny Tranom-bakoka Edo-Tokyo  tamin'ny lohataona tamin'ity taona ity ilay taratasy [ja] ho anisan'ilay fampirantiana ho fahatsiarovana ireo tantara mitohy navoakan'ny NHK. Mamintina ny fampirantiana i TJ Orosa ato .
Na dia niverimberina foana aza ireo teny tato ho ato, indrindra eo amin'ny sehatra politika , nanohina ny fontsika tsirairay ny fihetseham-po. Miblaogy i duku0312 :
Voalaza tao fa i Japana tamin'ny faran'ny vanim-potoana Edo niainan'i Ryoma Sakamoto dia mitovy amin'ny Japana amin'izao fotoana izao, miaraka amina trosa efa ho iray “quadrillion” Yen, tsy nahaenjika ny fanatontoloana ary ireo vahoaka sahirana amin'ny politikany sy ny hoaviny.
Izany no iadrandran'ireo Japoney ny hipoiran'ny Ryoma Sakamoto maoderina. Saingy…
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/11/7047/
 fanoritsoritana antsipiriany: http://www.psychologymasters.org/ryoma-sakamoto-renaissance-samurai/
 lisitra sy fanazavàna tsara ny momba ireo mpandray anjara fototra: http://jdramas.wordpress.com/2009/12/22/ryomaden/
 vola vy fahatsiarovana: http://lunaticg.blogspot.com/2010/03/ryoma-sakamoto-commemorative-coin.html
 zava-kanto nivoaka farany: http://food.3yen.com/2010-03-08/latte-art-in-japan-sakamoto-ryoma/
 lisitr'ireo toerana: http://www.timeout.jp/en/tokyo/feature/423
 Toeram-pitsangatsanganan'i Katsurahama any amin'ny faritr'i Kochi: http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/39/ryomazou.html
 Seranampiaramanidina Kochi Ryoma: http://www.kochiap.co.jp/
 namotopotra izany fanontaniana izany: http://toshogu.blogspot.com/2010/04/sakamoto-ryoma-and-meiji-restoration.html
 Sakamoto Ryoma sy ny Fanarenana ny vanim-potoana Meiji: http://www.amazon.com/Sakamoto-Ryoma-Restoration-Marius-Jansen/dp/0231101732
 adihevitra iray ao amin'ny vohikala Fanontaniana&Valiny ao amin'ny Yahoo! Chiebukuro: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210421882
 sary famantarana ny Softbank: http://www.softbank.co.jp/en/info/history/identity/
 sehatra politika: http://ampontan.wordpress.com/2008/03/06/sentaku-getting-japan-to-choose-a-cleaning/